तिनाउले नबगाएको एमालेको तुष बगाउला नारायणीले ? | News Polar
तिनाउले नबगाएको एमालेको तुष बगाउला नारायणीले ?
नारदमुनि शर्मा मंसिर ०९, २०७८, बिहिबार
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिबशेन सकेर बुटवलबाट फर्कदै गर्दा नेताहरुले पार्टीभित्रको बिमति सबै तिनाउमा बगाएको र अब एमाले एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने बताएका थिए ।तर तीनाउले छेउछाउमा नछोएको नारायणी किनारमा दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हुदैगर्दा एमालेका केही पूर्बनेता एमालेको महाधिवेशनबारे सञ्चारमाध्याम र पूर्ब कार्यकर्ताबाट जनकारी लिइरहेका छन् । पार्टीको पटक पटक कमाण्ड सम्हालेका नेताहरु यतिबेला नयाँ पार्टी गठन गरेर त्यसलाई नै बलियो बनाउन कस्सिएका छन् ।
एमाले अधिबेशनको अतिथीका रुपमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासहित धेरै बिदेशी नेताहरुलाई बोलाएको छ । तर लामो समयसम्म एमाले निर्माणमा योगदान पुर्याएका नेताहरु माधब नेपाल झलनाथ खनालहरु भने छुटेका छन् ।
कम्युनिष्टहरुको परम्परा नै बसेको छ कि मिले चाटाचाट र छुटिए काटकाट। यही चलनअनुसार नै यतिबेला एमालेबाट बाहिरिएकाहरुसँग लगभग पानी बाराबारको अबस्था रहेको छ , एक अर्काले उछित्तो काड्न बाकि राखेका छैनन् । महाधिबेशमा आमन्त्रण गरिएकाहरु धेरैले जाने बचन दिँदा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने दोधारमा पर्नुभएको छ । नजाँदा पार्टीगत रुपमा एमाले र अध्यक्ष ओलीसंग बिग्रिएको सम्बन्ध झनै बिग्रने जादा माधब नेपालले चित्त दुखाउछन् कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ ।
महाधिबेशनबारे एमालेले जहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेपनि वा नेताहरुले सञ्चारमाध्यामा प्रतिक्रिया दिएपनि सोधिने बिषय प्राय एउटै हुन्थो–नेकपका एकिकृत समाजबादी र त्यसका अध्यक्ष माधब नेपाललाई निम्ता दिनुहुन्छ कि हुदैन ? एमालेमा रहेका नेताहरुको एउटै जबाफ हुन्थो कि पार्टीका रुपमा चिन्दैनौै, सबै व्यक्तिलाई निम्ता दिन सम्भब पनि हुँदैन । एक पत्रकार सम्मेलनमा एमाले प्रचार बिभाग प्रमुख एबं सचिव योगेश भट्टराईले भन्नुभयो 'अप्राकृति सम्भोगबाट जन्मिएको पार्टीलाई हामीले चिन्दैनौँ । '
नेता भट्टराई पार्र्टी बिभाजन नहुदाँसम्म नेता माधब नेपालको साथमा रहनु भएको थियो । अध्यक्ष ओलीले पनि बुधबार सञ्चारकर्मीहरुसंग भन्नुभयो – माधब कुमार नेपाल र उहाँको गुटलाई एमालले पार्टी भनेर मान्न सक्दैन, महाधिवेशनमापार्टी लाई बोलाएका छौँ, सबै व्यक्तिलाई बोलाउन मिलेन । आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर बिपक्षीको सरकार बनाउने अनुशासनहिन काम गर्ने अराजक समूहलाई पार्टी कसरी मान्ने ?
यसपटक बुटबलमा जस्तो ओलीलाई टक्कर दिने नेता नारायणी किनारमा छैनन् । अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गर्नुभएका भीम रावल पनि कति समयसम्म टिक्नु हुन्छ त्यो पनि शंकाकै घेरामा छ नै । लगभग निर्बिरोध बन्न लाग्नुभएका ओलीले यस पटक नारायणी किनारबाट फर्कंदा तिनाउमा जस्तो के बगाउनु होला ? हठी स्वभाबका ओली र एमालेबाट बाहिरिएका चरम महत्वाकांक्षी नेताहरुलाई ११ औँ महाधिबेशन भन्दा अगाडी कै साच्चीकै एकीकृत एमाले बनाउनुहोला ?
अनि अर्काे महत्वपूर्ण कुरा त यो छ कि बुटवलको तिनाउँ नदिले बगाउन नसकेको त्यो तुष के नारायणीमा बग्ला ? नबग्ने हो र यसैगरी बाँकी नै रहने हो भने आगामी दिनमा यस्ता अवैध गर्भधारणको खतरा पो रहन्छ कि ? तिनाउदेखि नारयणीको किनारसम्मको समीक्षा गरेकै राम्रो ।
# एमाले अधिबेशन
प्रकाशित : मंसिर ०९, २०७८, १५:१६:०६